सागमा कुन खेल कहाँ हुँदैछ ? « रिपोर्टर्स नेपाल
सागमा कुन खेल कहाँ हुँदैछ ?
काठमाडौं, मसिर ७ । सागको औपचारिक उद्घाटन मङ्सिर १५ गतेदेखि हुने भए तापनि भलिबल खेल भने मङ्सिर ११ गतेदेखि नै शुरु हुनेछ । भलिबल खेल त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् राखेपको कर्भडहलमा हुनेछ ।
सागअन्तर्गका खेल पोखरामा आठ, जनकपुरमा एक र काठमाडौँमा २१ खेल हुनेछ । आर्चरी, ब्याडमिन्टन, महिला क्रिकेट, महिला फुटबल,ह्याण्डबल, ट्रायथोलन, भलिबल र भारोत्तलन गरी आठ खेल पोखरामा हुनेछ भने कुस्ती खेल जनकपुरमा हुनेछ । बाँकी सबै खेल काठमाडौँमा हुनेछ ।